Anatin’ny Ady Ve Rio de Janeiro? Miady Hevitra ny Mponina Ao Aminy · Global Voices teny Malagasy
Anatin'ny Ady Ve Rio de Janeiro? Miady Hevitra ny Mponina Ao Aminy
Voadika ny 26 Septambra 2017 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Ελληνικά, Português, Deutsch, English
Ny tafika breziliana ao anatin'ny hetsika any amin'ireo favela any Niterói, tanàna iray ao amin'ny fanjakan'i Rio de Janeiro, mandritra ny krizin'ny fanjakana. Sary nomen'i Estado Maior (CML) avy amin'ny Fotos Públicas, CC-BY-NC 2.0
(Raha tsy misy filazàna manokana, dia mankny amin'ny lahatsoratra amin'ny teny portiogey ny rohy rehetra ato).
Isanandro dia tondraky ny lohateny lehibe mahakivy momba an'i Rio de Janiero ny gazety breziliana rehetra, Rio de Janiero izay tanàndehibe faharoa any Brezila sady itoeran'ireo sary marobe fahita amin'ny karatra postalin'ny firenena.
Ireto àry misy ohatra vitsivitsin'ireo lohateny ireo :
‘Ankizivavy 14 taona Maty Voatifitra Tao Anatin'ny Sekoly’, ‘Mpitandro Filaminana Isaky Ny Roa Andro No Misy Mamono Any Rio de Janiero‘, ‘Nampiasa basinà Miaramila Ny Mpangalatra Mba Handrobàna Fivarotam-panafody ’, ‘Tafika 8.500, an-dranomasina sy an'habakabaka no alefan'ny Filoha Temer, ho any Rio ‘.
Ny taona 2017, miaraka amin'ny krizy ara-toekarena sy ny olan'ny volam-panjakana dia tonga amin'ny dingana faran-tampony ny herisetra any Rio de Janiero tato anatin'ny folo taona. Nisy ONG iray niantso mihitsy ny fidiran'ny Firenena Mikambana an-tsehatra.
Lasa resaka mahazatra izany ary tsy azo ekena — na farafaharatsiny hoy ny filazan'ny mpitantana gazety iray ao an-toerana. ‘Tsy ara-dalàna izao’, lahatsoratry ny gazety Extra — malaza amin'ny fandrakofany amin'ny antsipirihiny ny herisetra ao Rio– nivoaka tamin'ny faha-16-n'ny volana Aogositra no nanambaràna ny famoronana ny tsangana-dahatsoratra iray vaovao antsoina hoe “Ny adin'i Rio”. Havoaka ao amin'io tsanganana ireo tatitra rehetra momba ny herisetra ao an-tanàna. Nanazava ny antony nanosika azy ireo handray izany fanapahankevitra izany ry zareo :
Mbola hanohy hitatitra ireo karazana heloka bevava izay miseho any amin'ny tanàna lehibe rehetra manerantany ny EXTRA : vono olona, fandrobàna, heloka bevava amin'ny firaisana ara-nofo… Na izany aza, ny zavatra rehetra mivoana amin'ny fenitra mahazatran'ny sivilizasiona, ka tsy hitanay afa-tsy any Rio, ireo no ho ao amin'ny pejy natokana ho an'ny ady. (…) izany no fomba ahafahanay mikiakiaka : tsy ara-dalàna izany ! izany no safidy tsy maintsy ialànay mba hisakanana ny maso maha-mpanao gazety anay tsy ho lasa zatra mijery habibiana.
Ao anatina lahatsary efatra minitra nozaraina tao anaty Facebook, no anambaràn'ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny Extra, Octávio Guedes, fa tsy natao hireharehana ilay fanapahankevitra, satria mariky ny fahavoazana :
Extra ihany no hany gazety tokana eto amin'ny planeta izay manana sehatra ho an'ny ady ao amin'ny firenena izay tsy manaiky ny ady.
Ao amin'io lahatsary io ihany no ilazàn'ilay mpitati-baovaon'ny gazety iray fa toerana 843 ao an-tanàna no eo ambany fanarahamason'ny fikambanana miady amin'ny fanaovana heloka bevava, araka ny filazan'ny Fikambanana misahana ny fiarovana ny vahoaka any Rio de Janiero.
Izao ihany koa no lazain'ny lahatsoratra :
Fantatray fa rehefa ny resaka momba ny ady no avilana, dia azo ampiasaina handrakofana ny habibian'ny mpitandro filaminana izay nitifitra voalohany ary aorian'izay vao manontany. Fa arovanay ny ady mifototra amin'ny faharanitan-tsaina, ny ady atao amin'ny kolikolin'ny mpitandro filaminana, ka tsy ny vahoaka sivily no tanjona fa ny hery ara-toekarenan'ny mafia sy izay rehetra miaraka aminy.
Ny ratsy ve no betsaka entin'ny teny hoe “ady”, fa tsy ny tsara ?
Ao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny The Intercept Brasil, no anoheran'ny mpanao gazety Cecilia Oliveira ny fanomezana anarana ny herisetra any Rio hoe “ady”, mety hiafara amin'ny fanamarinan'ny haino aman-jery ny tsy fahombiazan'ny politikan'ny fiarovana ny vahoaka, eny fa hatramin'ny fanakonana ny andraikitry ny mpitandro filaminana.
Tsy ady izany. Vokatry ny kolikoly, ny faharatsian'ny drafitra fanampin'ny tsy fahampian'ny olona sy ny fahaizana, ny fanaovana tsinontsinona ny tantara sy ny tsy firaharahiana ny asam-panjakana — araka ny nanehoan'ny Extra izy tenany azy tamin'ny fanadihadiana ny hetsiky ny mpitandro filaminana any Rio. Fampatsiahivana fotsiny : lehibe kokoa noho ny renivohiny ny fanjakan'i Rio de Janiero.
Diabe ho an'ny fandriampahalemana tany Niterói, ao amin'ny fanjakan'i Rio de Janeiro, ho fahatsiarovana ny namonoana an'i Rafael LAge, ilay mpampiroborobo ny kolontsaina. Sary avy amin'i Fernando Frazão/Agência Brasil, nahazoana alàlana.
Ho an'i Cecilia dia tsy marina ny filazana fa ” toerana mahery setra indrindra any Brezila” i Rio de Janiero : “ny tanàna 22 amin'ny 30 mahery setra indrindra any Brezila dia any amin'ny faritra Avaratra sy Avaratra Atsinanana, araka ny angon-drakitra tamin'ny 2015 (ny vao haingana indrindra). Samy tsy ao amin'ny fanjakan'i Rio de Janiero ireo. Raha jerentsika ny tahan'ny vono olona [isaky ny fanjakana], laharana faha-16 i Rio”, hoy ny sorany.
Fananan'ny orinasa Globo, vondron'orinasa misahana haino aman-jery lehibe indrindra any Amerika latina ny Extra, izay, ambaran'i Cecilia fa akon'ireo politikan'ny fiarovan'ny fanjakana ny vahoaka efa am-polo taona. Isan'ireny politkan'ny fiarovana ireny ny famoronana ny UPP (Antdianà polisy misahana ny filaminana), natomboka tany Rio tamin'ny 2003, izay mikendry fanpariahana mpitandro filaminana marobe mba ” hangalàna” ny favela sy hametrahana andiany maharitra ao. Na nihena aza ny fahafatesana noho ny herisetra tany am-boalohany, dia mafy ny tsikera nahazo ny UPP tato anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny fitarainana maro napetrak'ireo vondrom-piarahamonina mahantra izay noheverina fa ho arovan'ireto mpitandro filaminana vao naorina ireto.
Notsongain'ilay mpanao gazety, João Paulo Charleaux, ho ao amin'ny pejy Facebook-ny ny lahatsoratra iray nosoratany tamin'ny 2010 izay manazava fa tsy feno ny fepetra ilaina hiantsoana ny herisetra ao Rio hoe ‘ady an-trano’– araka izay voafaritra ao amin'ny Fifanarahan'i Genève. Hoy izy :
Ankoatry ny fifandirana momba ny lalàna, dia misy fiantraikany goavana amin'ny olona ny filazàna fa misy ady any Rio. Ny fanaovana izany dia mahatonga ny fiarahamonina hamporisika ny fanjakana hihetsika amin'ny fampiasàna ireo fitaovana sy ny fomba fanao mahazatra amin'ny ady, amin'ny fidirana amin'ny faritry ny ‘fahavalo’, izay manao ny olona sivily ho toy ny pentina manjavozavo fotsiny ao anatin'ny tontolo taza-maso, mety ho tratry ny ‘fahavoazana tsy nahy’ sy ny ‘bala very’.
Na misy ady na tsia, mbola mijaly foana ny mponin'ireo favela ao Rio. Herinandro izay no lasa hatramin'ny nihanihan'ny mpitandro filaminana ny havoanan'i Jacarezinho mba hamaliana faty ny fahafatesan'ny manamboninahitra iray. Fa eo anivon'izany herisetra rehetra izany, tranga iray indray no lasa lohateny lehibe : Maty voatifitry ny mpitandro filaminana avy eny amin'ny angidimby ny mpivaro-boankazo iray.